Orinasa sy mpanamboatra China Rulers | SJJ
Manana olana amin'ny fitadiavana fanomezana azo ampiharina amin'ny mpanjifanao? Ny mpitondra manokana dia fanomezana tonga lafatra izay azon'izy ireo ampiasaina amin'ny fiainana isan'andro.
Manana olana amin'ny fitadiavana fanomezana azo ampiharina amin'ny mpanjifanao? Mpanapaka manokana no fanomezana tonga lafatra izay azon'izy ireo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro.
Pretty Shiny dia mamatsy fitaovam-pianarana am-baravarankely, biraon'ny birao ao anatin'izany mpitondra. Ny mpanapaka maharitra, azo ianteherana. Miaraka amina endriny vita pirinty marina amin'ny roa santimetatra sy santimetatra, mora aminao ny misafidy ny iray amin'ny mizana hampiasana ary hijoro amin'ny fangatahan'ny fampiasana isan'andro.
Manome hazo, plastika ary mpitondra silipoamin'ny loko isan-karazany, mba hahafahanao misafidy mpanapaka mety indrindra hanatsara ny marikao! Raha mila zavatra manokana, manokana ianao na mitady hividy mpitondra tsy manam-paharoa, aza misalasala mandefa hafatra aminay noho ny fangatahanao.
Fitaovana: PVC, silicone, PP, ABS, ABS + AS, PET, metaly, hazo sns.
Atao pirinty amin'ny santimetatra sy santimetatra, marika mazava ho an'ny fandrefesana mety aminao
Fitaovana fandrefesana ambonin-javatra tsara, manome anao traikefa tsara amin'ny fampiasana
Fampiharana marobe, mety amin'ny fampiasana trano, birao, indrindra ho an'ny mpianatra sy mpampianatra
Vidiny mifaninana, santionany maimaimpoana, famolavolana kanto maimaimpoana
Manaraka: Notebook & Notes sticky
mpitondra mpanonta pirinty